हरेक रोगको जड उच्च रक्तचाप ! कसरी जोगिने ? (भिडियो सहित) « Himal Post | Online News Revolution
हरेक रोगको जड उच्च रक्तचाप ! कसरी जोगिने ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : २०७४, १३ असार २२:०४
कथित आधुनिक जीवनशैलीसँगै उच्च रक्तचापका बिरामी पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । अस्वस्थ खानपान विलासी जीवनशैली नै उच्च रक्तचाप हुने प्रमुख कारण हो ।
उच्च रक्तचापका बिरामी बढ्नु धेरै रोग निम्तँदै छ भन्ने संकेत पनि हो । के हो उच्च रक्तचाप ? यसले कस्ता रोग लाग्न सहयोग गर्छ ? मुटुरोग विशेषज्ञ डा.शैलेन्द्र कुशवाहासँग गरिएको कुराकानी … उच्च रक्तचाप भनेको के हो ? मुटुबाट रक्तसञ्चार भएको बेला रक्तनलीको भित्तामा पर्ने दबाबलाई नै रक्तचाप भनिन्छ । यसरी रक्तनलीको भित्तामा पर्ने दबाबको आधारमा माथिको रक्तचाप र तलको रक्त चाप भनेर छुट्याइन्छ । माथिको रक्त चापलाई सिस्टोलिक र तलको रक्तचापलाई डायस्टोलिक भनिन्छ ।
सामान्यतया एक स्वस्थ व्यक्तिमा रक्तचाप १२०÷८० हुनुपर्छ । माथिको १२० देखि १३९ र तलको ८० देखि ९० सम्मको रक्तचापलाई प्रि हाइपरटेन्सन भनिन्छ । यो उच्च रक्तचाप हुने संकेत हो । यो भन्दा बढी रक्तचाप हुनुलाई नै उच्चरक्तचाप भनिन्छ । उच्च रक्तचाप हुने प्रमुख कारण के हो ? उच्च रक्तचाप हुने कारण धेरै छन् । जसमध्ये… बढी तौल ।
विलासी जीवनशैली ।
अस्वस्थ खानपान ।
धुम्रपान,मध्यपानको सेवन ।
तनाव वंशाणुगत गुण ।
उच्च रक्तचापका लक्षणहरु के के हुन ?
टाउको दुख्नु ।
रिंगटा लाग्नु ।
जिउ भारी हुनु ।
खाना मन नलाग्नु ।
उच्च रक्तचाप हुनबाट बच्न के गर्ने ?
उच्च रक्तचाप हुन नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम कुरा हो । एकपटक उच्च रक्तचाप भएपछि सधैभरी औषधि सेवान गर्नुपर्छ । जीवनशैलीमा सुधार गरे औषधिको मात्रा घटाउन या कालान्तरमा बन्द गर्नपनि सकिन्छ । वंशानुगत समस्या नै भएमा भने औषधि जीवनघर खानुपर्नेपनि हुनसक्छ । यसमाथि उच्च रक्तचाप धेरै रोगको जड पनि हो । उच्च रक्तचाप हुन नदिन यसो गर्ने … तौल नियन्त्रणमा राख्ने । धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने । बढी मसलादार, नुनिलो खानेकुरा नखाने । नियमित व्यायाम गर्ने । सक्रिय जीवनशैली अप्नाउने । हरियो सागपात तथा सिजन अनुसारका फलफूल खाने ।
सन्तुलित आहार सेवन गर्ने । उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिलाई कस्ता रोगको जोखिम बढी हुन्छ ? मिर्गौला आँखा मश्तिष्क पक्षघात मुटु उच्च रक्तचापकै कारण हृदयघात,स्ट्रोक लगायतका रोग निम्तिने खतरा बढ्दछ । यो उमेर बढेसँगै धेरैलाई देखापर्ने भएकाले बेलैमा होसियारी अपनाउनु हितकर हुन्छ ।